10 Atụmatụ Olee otú Iji hazie gị Hand akpa | Save A Train
Home > Travel Europe > 10 Atụmatụ Olee otú Iji hazie gị Hand akpa
Oge Ọgụgụ: 6 nkeji(Emelitere ikpeazụ On: 25/01/2021)
Ọ dịghị mkpa na ogologo nke njem - ọ ga-abụ a izu ụka beach getaway ma ọ bụ njem izu atọ nke Himalayan - ị ga-ebuchi akpa nke nha ọ bụla, ị ga-achọ ịma etu esi ahazi, na nke a blog anyị ga-elekwasị anya na akpa aka gị. E nwere ọtụtụ na-atụle mgbe choputa ihe iji mee ka: ụdị na ogologo nke gị na njem, gị njegasi, ihu igwe ahụ, hà akpa gị, na ihe ọ bụla ibu ókè amanye gị mode nke njem. Na na ọtụtụ na ihe na play, ọ dị mfe overpack ma ọ bụ n'okpuru mkpọ, karịsịa ma ọ bụrụ na i chere ruo ikpeazụ nkeji. zere overpacking, egwu ala site na akpa gị na ndị ọzọ na isi ike mgbe abanye ụgbọ oloko gị na ndị a 10 Atụmatụ na otú hazie gị aka ibu.
Olee otú iji hazie gị Hand akpa NDỤMỌDỤ 1: Nọgidenụ Na-Travel Documents Ikewapụ
This is one of the most important things to consider when you are deciding how to organize your hand luggage. Nọgidenụ na njem gị akwụkwọ ikewapụ. Ọ bụghị nanị na nke a na-adaba adaba ihe na-eme kamakwa mma ihe na-eme. Wepụnụ ha na a obere akpa na-adị mfe iji wepu si n'aka gị ibu. Otú ahụ na ị na-enweghị ka igwu mgbe ọ bụla ị chọrọ gị paspọtụ, tiketi ma ọ bụ ego.
Hazie gị Hand akpa NDỤMỌDỤ 2: Mee A mbukota List
Passport? Tulee. atu? Tulee. sunscreen? Maka udo nke uche na ị nwetara ndị dị mkpa kpuchie, mee onwe gi ndepụta njem ụbọchị ole na ole tupu mkpali njem ahụ amalite!
Hazie gị Hand akpa NDỤMỌDỤ 3: zere Stains
Ọ dịghị ihe manụ karịa ewere nke ukwuu oge na-ahọrọ ihe n'egos'ike ị na-aga naanị chọta ị pụrụ ọbụna na-eji ha! Mgbe nwere nsogbu a ọzọ. Firstly i kwesịrị ịdị na-eme ka n'aka gị ìhè acha uwe na-juru n'ọnụ ntughari, na abuo, jigide hotel disposable ịsa okpu and use them to cover the base of your shoes.
NDỤMỌDỤ 4: Roll Ma agụụ Pack
Iji zọpụta mbara ma na-akwụsị creasing, tụgharịa uwe gị kama mpịachi ha, mgbe ha na agụụ mkpakọ bags. Iji jiri ndị a na akpa, etinye gị na uwe, mechie akpa, mgbe afanyekwa na ikuku si. Nke a ga-ahapụ gị na nza ọzọ ohere gị akpa akwa and will prevent creases.
NDỤMỌDỤ 5: akpa Safety
Mkpọchi gị na akpa na-edebe ha kpọchiri. Were ha na ị mgbe ị na-eji ime ụlọ mposi. Ọ bụrụ na nke a bụ ekwe omume na ị na-eme njem nanị, wetara niile bara uru ihe na ị. Ahapụ ese foto, ego, ngwá electronic ma ọ bụ njem akwụkwọ echeghị echiche.
Nọgidenụ na-ogige kpọchiri mgbe ị na-ehi ụra, ọ bụrụ na ọ kwe omume. -Adịghị atụkwasị obi na-amabughị. Ọbụna a ọma uwe ọbìa nwere ike edidi a ohi. Ọ bụrụ na ị na-ehi ụra na a nkewa na njem ị na-amaghị, ijide n'aka na-ehi ụra n'elu gị ego belt nke mere na ị ga-achọpụta na ọ bụrụ na mmadụ na-agbalị iji ya si ị.
NDỤMỌDỤ 6: Jiri mbukota cubes
” E nwere bụghị ọtụtụ na-eme ka m na-eche dị haziri ahazi ụmụ mmadụ dị ukwuu dị ka nkerisi m nwere n'ime agba-nzobe cubes. Ọ bụ ya mere ihe magburu onwe ya ịma kpọmkwem ebe ihe niile i wetaara bụ ka anya dị ka ị unzip gị akpa akwa. Plus, you can very easily move your packing cubes into the drawers of your hotel dresser and instantly be done unpacking and ready to go.” - Richelle Szypulski, Senior Associate Editor
NDỤMỌDỤ 7: Size Mmachibido N'ihi Hand akpa
Yiri ụgbọ elu, ọtụtụ ụgbọ oloko nwere mgbochi na ego na size nke akpa na ị na-ekwe na-ebu na. N'izugbe, ị ga-enwe ike na-ebu na niile nke gị akpa, ma ụgbọ oloko gị ụgbọelu nwere ike ịchọ ka elele gị ngafe ibu na ihe omume ya karịa ibu na size ma ọ bụ ibu mgbochi. N'ihi na ọtụtụ ụgbọ oloko, ị pụrụ ibu abụọ akpa on board ụgbọ okporo ígwè, dị ka ogologo dị ka ọ bụla akpa adịghị gafere 50 lbs ma ọ bụ ibu karịa 28 X 22 X 14 sentimita. Obere na onye ihe dị ka ọgwụ na ahụ ike na ngwaọrụ na ọgwụ, Ohiri isi, blanket, Coolers, na purses ma ọ bụ na akpa na-erughị 12 X 12 X 12 sentimita asatọ ga-gua n'ebe ebu na ibu ịgba.
NDỤMỌDỤ 8: Ngwa Na Hand akpa
Olee otú ị na-emekarị na-ahazi niile nke gị electronics, Gịnị, ndị fiddly ibe n'ibe na-ewe gị afọ igwu si na nche? Stof ha dị ka ndị fọdụrụ n'ime anyị? Ọfọn, ma ọ bụrụ na ị chọrọ hazie gị aka ibu ahụ ga-esi onwe gị a stash nke ziplock bags. chaja ekwentị, igwefoto chaja, nkwụnye, ekweisi - na-extra plastic akpa (otu ndị ị ga-eji maka n'aka ibu mmiri) na-eji ha na-echekwa eletriki ihe, ihe maka njem home (mkpịsị ugodi ụlọ, adọba ụgbọala tiketi, na ụgbọ ala igodo), ọgwụ na ndị ọzọ na omume rụrụ ngwa.
NDỤMỌDỤ 9: Olee otú Iji Mkpọ Akwụkwọ. Emela!
Ma ọ bụ na nke uzuoku romance akwụkwọ, na-akpali akpali Sci-Fi, ma ọ bụ a nkịta eared njem ndu, ibudata ya tupu gị na njem. Ọbụna ma ọ bụrụ n'ụlọ ị na-a akwụkwọ til m anwụ ụdị, ịzọpụta ohere na ibu gị aka ibu na-adịghị ịgụ na wifi na-awụlikwa elu azụ n'ime akụkọ gị n'ụzọ zuru okè positioned beach oche, nanị jide n'aka na ọ bụ na a mmiri na-eguzogide ọgwụ kpuchie ngwaọrụ.
NDỤMỌDỤ 10: Kpakọọrọ Ọ All Ọ
M super imetosi. M na-ekweta na ọ. na-ahazighị ahazi! Ma ihe na-enyere m aka m na isi m ogologo ọbụna mgbe m abịa na nnọọ ikpeazụ nkeji, bụ m na-ewe oge dina ihe nile tupu ọ bụla ihe na-aga n'ime m akpa m. Nkụzị ihe ọnụ m na bed na-enyere m ahụ ngwa ngwa ihe ihe adịghị sere ha ibu. A ụzọ uwe ogologo ọkpa na ike na-eyi na otu n'elu, ma ọ bụ na-achọ akpụkpọ ụkwụ m na-adịghị ama-eme atụmatụ na-abịa? Back na drawer, gị gaba! Seeing everything clearly before I start also helps me fit things into my bag in a logical way. Maka m, na nke a pụtara na-amalite na m bulkiest ihe, mgbe cherry buru fechaa ihe Tuck n'ime gaps gburugburu ha na-etolite a sturdy isi oyi akwa iwu si.
Nwere ndị a Atụmatụ nyeere gị aka chepụta otú hazie gị aka ibu? Anyị ga-n'anya mara! AKWỤKWỌ a ụgbọ okporo ígwè tiketi site Save A Train na snap họpụta mmadụ aka gị ibu mgbe iji ndị a Atụmatụ!
Ị chọrọ Embed anyị blog post “10 Atụmatụ Olee otú Iji hazie gị Hand akpa” na na gị na saịtị? ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftips-organize-hand-luggage%2F%3Flang%3Dig- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)